Ny tanky anatiny sy ny akorany ivelany an'ny Dewar dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ary ny rafitra mpanohana tanky anatiny dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony hanatsarana ny tanjaka ary hampihena ny fihenan'ny hafanana. Misy sosona insulated hafanana eo anelanelan'ny tanky anatiny sy ny akorandriaka ivelany. Fitaovana fanamafisana hafanana marobe sy sosona avo lenta miantoka ny fotoana fitehirizana rano.
Ny vaporizer efa namboarina dia namboarina tao anaty akorany mba hanovana ny ranona cryogenika ho lasa gazy, ary ny supercharger namboarina dia afaka mampitombo ny tsindry amin'ny tsindry efa voafaritra mialoha ary hitazomana azy io mandritra ny fampiasana azy, hahatratrarana ny tanjon'ny fampiasana haingana sy maharitra. Ny varingarina misy gazy voaroaka tsirairay dia manana firafitra peratra vy (peratra fiarovana) hiarovana ny fantsona. Ny peratra fiarovana dia ampifandraisina amin'ny varingarina misy fononteny efatra, ary ny fononteny tsirairay dia asiana potika mba hanamorana ny fampiasana trolley sy crane hitondra ny varingarina entona.
Ny faritra miasa rehetra dia apetraka eo an-tampon'ny varingarina entona ho mora ampiasaina. Ao anatin'ny tontolon'ny fampiasana tsy miankina, ny mpampiasa dia afaka mifehy tsara ny fizotran'ny fampiasana amin'ny alàlan'ny valizy fandefasana, valizy fanamafisam-peo, fandrefesana faneriterena, valizy amin'ny rano, sns
Mba hahazoana antoka fa eo ambanin'ny tsindry fiarovana ny valizy anatiny ao amin'ny varingarin-tsolika, dia apetraka ao amin'ny varingarin-tsolika ny valizy fiarovana sy ny kapila mampandeha azy.
Izy io dia ampiasaina hitaterana sy hitehirizana ranon-javatra cryogenika toy ny oksizenina ranoka, azota azota, argon ranon-javatra, dioksidan'ny gazy karbonika, LNG, sns. Ny silinder entona azo ampiasaina hamatsiana entona misy gazy na gazy.
Mora ampiasaina ny varingarina entona, azo antoka sy azo antoka, ara-toekarena ary maharitra. Ireto misy fiasa manokana:
1. Ny rafitra fanohanana ny tanky anatiny dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony hahatratra ny tanjon'ny fihenan'ny hafanana ambany sy ny tanjaka avo.
2. Mora ampiasaina izy ary afaka miasa tsy miankina amin'ny olona tokana.
3. Tehirizo ranoka cryogenika madio. Fahafahana mitahiry lehibe. Ny fahafaha-mitahiry gazy amin'ny varingarin-tsolika dewar DP175 dia mitovy amin'ny mihoatra ny 18 heny ny fitahirizana entona amin'ny varingarina entona misy tsindry avo be
4. Ny tsindry anatiny amin'ny varingarin-tsolika dia hiakatra mandritra ny dingan'ny famonoana aorian'ny famenoana. Ny varingarina entona dia manana rafitra fanamafisam-peo avo lenta, ary ambany ny tahan'ny fiakaran'ny tsindry. Amin'ny toe-javatra mahazatra, tsy ilaina ny mampihena ny tsindry amin'ny alàlan'ny valizy fiarovana.
5. Ny supercharger sy vaporizer namboarina dia afaka mahatsapa famatsian-tsolika na ranon-javatra mitohy, ary tsy ilaina ny mametraka vaporizer ivelany eo ambanin'ny fatra natao.
Indostrian'ny subpackage gazy
Data momba ny vokatra
Previous: Sampana maimaim-poana ho an'ny fitehirizana Lng - Cylinder Oxygène Liquid - Runfeng
Manaraka: Tavoahangy gazy karbonika misy ranoka
Tanana Argon Liquid